China diatomite kieselguhr diatomaceous fatịlaịza Ala mmezi mmezi ụwa granules ụlọ ọrụ na-emepụta | Yuantong
JiLin Yuantong ralnweta Co., Ltd.
Ngwaahịa Calcined Diatomite
Ngwaahịa Diatomite Flux Calcined
Ezigbo ụwa diatomite
Pesticide mmako na ntụ ntụ
Pesticide pụrụ iche nwekwara
Powdermụ ahụhụ na-egbu egbu
Technologylọ Ọrụ Teknụzụ
Anyị Team & Ahịa
Ala na-arụ ọrụ
diatomaceous diatomite silica mkpụrụ granular diatomac ...
eke amorphous silica
Ọrụ ụwa zuru ezu
diatomite kieselguhr diatomaceous fatịlaịza S ...
diatomite kieselguhr diatomaceous fatịlaịza Ala improver mmeghari ụwa nsogbu dị iche iche
C05, NS 10, Nda, C20, C30, C40
Ala improver, Agbakwunyere ala
fatịlaịza ala diatomaceous Ala na-eme ka nsogbu dị iche iche
ezigbo inorganic ala improver
20kg / Akpa
50000 Metric ton / Metric Tọn kwa ọnwa
Nkwakọ ngwaahịa: 1.Kraft akwụkwọ akpa n'ime ihe nkiri net 20kg. 2.Export ọkọlọtọ eyi kpara akpa net 20 n'arọ. 3.Export ọkọlọtọ 1000 n'arọ eyi kpara 500kg akpa .4. Dị ka ndị ahịa chọrọ. Mbupu: 1. Banyere obere ego (ihe na-erughị 50kgs), anyị ga-eji awara awara (TNT, FedEx, EMS ma ọ bụ DHL wdg), nke dị mma. 2. Banyere obere ego (site na 50kgs ruo 1000kgs), anyị ga-anapụta site n'ikuku ma ọ bụ site n'oké osimiri. 3. Banyere ego nkịtị (karịa 1000kgs), anyị na-ebutekarị anyị n'oké osimiri.
Ọ bụla ọdụ ụgbọ mmiri nke China
Etiti oge :
Ibu (Metric Tons) 1 - 50 50
Est. Oge (ụbọchị) 10 Ndi kpakorita
Nye anyị iwu!
Uru nke diatomaceous ala improver:
1. Ọ maara nke ọma na silicon dị mkpa maka uto ahụ ike nke osisi na mgbọrọgwụ. Ọ bụ ezie na amorphous silica na diatomaceous ụwa mejupụtara anaghị agbasa na ala. Otú ọ dị, ọ dị oké ọnụ ahịa na obere ego bụ silicon soluble, nke nwere ike iji nwayọọ nwayọọ hapụ ma tinye ya na mgbọrọgwụ nke osisi ahụ, si otú a na-emeziwanye ọgụ nke osisi ahụ ma na-eme ka ikike nke osisi ahụ nwee ike iguzogide ọrịa.
2. Diatomaceous ụwa bụ ihe na-eweta poros adsorbent na-enweghị ntụpọ, yabụ na ọ nwere ọrụ nke njigide mmiri, njigide fatịlaịza na ịhapụ ntọhapụ. Chekwaa mmiri, chekwaa fatịlaịza, chekwaa oge ma chekwaa ego.
3. Diatomaceous ụwa bụ ịnweta ihe na-arụ ọrụ na arụ ọrụ okpu yana mpụta ọrụ mpụta na mmiri na edozi edozi, yabụ ọ bụ ezigbo mkpụrụ maka omenaala na-enweghị ala.
4. Diatomite bu ihe ndi na-adighi agbanwe agbanwe nke nwere ezighi ezi, nke nwere ike belata njuputa ala, ala adighi, belata compaction, ma kwado ikuku ntinye, nrughari na uzo nke mgbọrọgwụ osisi.
5. Ọdịdị pụrụ iche nke ụwa diatomaceous nwere ike ịrụ ọrụ na ala, kwalite uto nke nje bacteria bara uru na gburugburu ebe a, dozie iru mmiri, ọnọdụ okpomọkụ na isi iyi nri, ma n'otu oge ahụ nwee mmetụta nke igbu pests na ọrịa, mgbe ị na-eji diatoms Ala nwere ike ịbawanye ụba nke ala ma bulie ọdịnaya oxygen nke ala ahụ, nke mere na nje ndị ahụ enweghị ike ịdị ndụ. Nke a nwere ike ịchekwa ọtụtụ ahịhịa ọgwụ na ọgwụ ahụhụ, nke ọ bụghị naanị na-echekwa gburugburu ebe obibi, kamakwa ọ na-ebelata ọnụahịa nke ịgwọ ahịhịa na osisi.
6. Ebe ọ bụ na ụwa diatomaceous bụ mineral na-egbu egbu, ọ bụ ihe eji arụ ọrụ, nke nwere nchekwa na gburugburu ebe obibi.
Pịa na oyiyi dị n'elu!
Q: Olee otu ịtụ?
A: Ntụpụ ụkwụ 1: Plese gwa anyị nkọwapụta teknụzụ zuru ezu ịchọrọ
Ntụpụ ụkwụ 2: Mgbe ahụ, anyị na-ahọrọ ụdị ụdị ụdị diatomite na-enyere aka.
Ntụpụ ụkwụ 3: Pls gwa anyị ihe ndị achọrọ, kwụọ ụgwọ na arịrịọ ndị ọzọ.
Ntụpụ ụkwụ 4: Mgbe ahụ anyị ga-aza ajụjụ ndị a ma nye onyinye kacha mma.
Q: you na-anabata OEM mepụtara?
Q: you nwere ike ịnye nlele maka ule?
A: Ee, ihe nlele bụ n'efu.
Q: Kedu mgbe ga-eweta nnyefe?
A: Oge nnyefe
- Usoro ahia: daysbọchị 1-3 mgbe anata ụgwọ zuru ezu.
- Usoro OEM: 15-25 ụbọchị mgbe nkwụnye ego ahụ.
Ajụjụ: kedu asambodo ị nwetara?
A: ISO, kosher, halal, akwụkwọ ikike mmepụta nri, ikike ịnweta, wdg.
Q: have nwere nke m diatomite?
A: Ee, Anyị nwere ihe karịrị 100 nde nde diatomite nke nwere ihe karịrị 75% nke ndị China niile egosipụtara echekwa. Ma anyị bụ ndị biigest diatomite na ngwaahịa diatomite na Eshia.
Nke gara aga: diatomaceous ụwa nsogbu dị iche iche fatịlaịza Ala improver
diatomite ịnweta nri nri nri
Nri nri eke diatomaceous ntụ ntụ
Centrifugal mgbatị mkpuchi ụwa diatomite dia ...
agriculture organic eco-enyi na enyi diatomaceous e ...
F30 TL301 diatomite ugbo Chemical oru oma Pee ...
diatomaceous diatomite calcined ụwa ntụ ntụ
Diatomaceous ụwa Industrial park, Linjiang City, Jilin n'ógbè, China
Skype: Mee Lv